Gabar yar oo shan sano jir ah oo la la’ yahay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gabar yar oo shan sano jir ah oo la la’ yahay
La daabacay måndag 8 juli 2013 kl 10.16
Waxaa shalay axaddii la waayey gabar yar oo shan sano jirta. Gabadhaas yari waxay ku cayaareysey barxadda ku ag taal guriga reerkooda oo ku yaal tuulada Horndal ee duleedka magaalada Avesta. Hooyadii gabadha ayaa markii saacaddu ahayd kowdii duhurnimo ka weysey gabadheedii goobtii cayaarta. Waxayna durbadiiba ku dhaqaaqay doondoonka iyo baafinta gabadheeda. Kolkii ay weysey ayey la xiriirtay boliiska kolkay saacaddu ahayd lixdii maqribnimo. Boliiskuna wuxuu durbadiiba bilaabay raadgoobka gabadhaas.
Waxaa kaloo raadinta gabadhaas ka qaybqaatay ururka Missing People iyo dad ka socda gurmadka badbaadada. Waxaa raadinta gabadhaan ka qaybgelaya diyaarad helikobtar ah iyo eyda boliiska. Jonas Lilliemarck oo ah sarkaalka kaltanka boliiska gobolka wuxuu sheegay in ay gabadhani asal ahaan ka soo jeedo Soomaaliya. Wuxuu kaloo sarkaalkani sheegay in aysan ilaa hadda tuhunsanayn in fal dembi dhacay, balse ay aad uga walaacsan yihiin gabadhaan oo saacado badan la la’ yahay. Ciidamada boliisku waxay dadweynaha ka codsanayaan in ay u gudbiyaan wixii war ah oo ku saabsan gabadhaan. Gabadhaan yar oo dhererkeedu yahay 120 cm waxay geshaneyd markii la waayey xijaab midabkiisu huruud ama jaallo xigo oo ay ka lushaan biro yaryar iyo surweel midabkiisu basali yahay.
- Waxaan sii wadi doonnaa dadaalka aan ugu jirno raadinta gabadhaan, annagoo weliba gargaar weyddiisannay ciidamada xoogga dalka, ciidamada gurmadka, ayuu yiri Jonas Lilliemarck oo ah sarkaalka kaltanka leh ee gobolka Dalarna.
Isha : Ekot